Masuul Sare Oo UEFA Ka Soo Shaqeeyay Oo Cadeeyay Sida Ay Liverpool Iyo Kooxaha Premier League Uga Niyadjabsan Yihiin Xukunkii Man City Ganaaxa Champions League Looga Qaaday. - Gool24.Net
Masuul Sare Oo UEFA Ka Soo Shaqeeyay Oo Cadeeyay Sida Ay Liverpool Iyo Kooxaha Premier League Uga Niyadjabsan Yihiin Xukunkii Man City Ganaaxa Champions League Looga Qaaday.
Warka ugu waynaa kubbada cagta aduunka ee 24 kii saacadood ee la soo dhaafay waxa uu ahaa in maxkamada xalinta khilaafaadka kubbada cagta ee CAS ay badashay xukunkii ganaaxa labada sano ahaa ee ay FIFA hore ugu soo rogtay kooxda Manchester City ee tartanka Champions league.
Maamulka Manchester City, ciyaartoyda iyo shaqaalaha Etihad Stadium ayaa farxad ku soo dhaweeyay markii laga qaaday ganaaxii labada sanadood laga saaray Champions league isla markaana lacagtii ganaaxa ahayd ee 30 ka milyan ahayd lagu soo yareeyay 10 milyan kaliya.
Madixii isgaadhsiinta UEFA ee William Galliard ayaa shaaciyay in kooxda Liverpool iyo kooxaha kale ee Premier league ay ka niyadjabsan yihiin go’aanka maxkamada CAS ay ganaaxii Champions League kaga qaaday Manchester City.
William Galliard ayaa cadeeyay in Liverpool ay si gaar ah uga niyadjabsan tahay go’aanka CAS maadaama oo kooxda Etihad Stadium ka dhisan loo ogolaan doono in ay lacago waali ah ka heli doonto imaaraadka carabta isla markaana ay dhisi doonaan koox si dhab ah Liverpool uga joojin karta in ay koobka Premier League markale ku guulaysan karaan.
Laakiin waxaa hubaal ah in Liverpool iyo kooxaha Premier League ayna ahayn kooxaha kaliya ee ka niyadjabay xukunka maxakamada CAS iyada oo maamulka horyaalka La Liga ay eedayn culus u soo jeediyeen maxkamada CAS waxaana muuqatay in Man City ay cadow aad u badan lahayd.
Laakiin madixii isgaadhsiinta UEFA ee William Galliard ayaa cadeeyay in xukunka CAS ee Man City uu yahay mid kubbada cagta gabi ahaanba dili doona maadaama oo lacago waali ah oo aan kubbada cagta ka soo bixin ay maal qabeenada imaaraadku ku soo shubi doonaan Man City.
William Galliard ayaa yidhi: “Nooca kuxunkan ah ee ka yimid CAS, waxay Manchester City awoodi doontaa in ay bilyanis ka hesho imaaraadka wuxuuna tartanku asal ahaan noqon karaa mid u dhexeeya Yurub, Saudi Arabia, Qatar iiyo United Arab Emirates, ma ogi haddii uu China isna doonayo in uu ku soo biiro”.
Madixii hore ee xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee William Galliard ayaa sharaxay in go’aankii CAS ee Man City uu noqon doono halis wayn wuxuuna yidhi: “Xaqiiqdii taasi waxay halis wayn ku tahay kooxaha xirfadlayaasha kubbada cagta oo ay Yurub wajahayso”.
Waxa uu William Galliard la yaabay nooca lacagta ganaaxa ay maxkamada CAS ku xukuntay Man City oo hore 30 milyan iyo laba sano oo ganaax ah la saaray wuxuuna yidhi: “10 ka milyan ee ganaaxa ahi waxay la mid tahay sida tuunbada sharaabka ee uu dabaakhu soo dhex dhigo(koobka)”.
“Dhibaatada oo dhami waa mustaqbalka ciyaaraha. Miyay badbaadi doontaa marka uu noqdo tartan u dhexeeya bariga dhexe oo kaliya? ayuu Gilliard hadalkiisa raaciyay.
William Galliard oo ka hadlaya niyadjabka kooxaha Premier league ee ganaaxa Man City laga dul qaaday ayaa yidhi: ” Waxaan filayaa in uu niyadjab badani ka dhex jiro kooxaha kale, sababtoo ah waxay noqdeen kuwo aan la ilaalin oo ay ku jiraan kooxaha Ingiriisku”.
“Marka aad leedahay mulkiile kaas oo kubbada cagta ah, sababtoo ah in uu doonayo sidii uu faa’iido sharci ah u samayn lahaa in uu wajaho tartame kaas oo jeebka aad hoos ugu galinaya aduunyada oo dhan iyo lacag aan dhamaad lahayn waa niyadjab layaableh”. ayuu William Galliard hadalkiisa ku daray.
Manchester City oo xili ciyaareedkan koobka Premier league dhibco badan ugu wayday Liverpool ayaa hadda fursad u heli doonta in ay lacago waali ah dib u dhis ugu samayn karto kooxdii qiimaha sare Etihad Stadium ku joogtay ee uu Guardiola ku shaqaynayay.